Cháo lươn cho bé có tốt không? Cách nấu cháo lươn ngon, đơn giản nhất | Muasalebang - Muasalebang
Cháo lươn cho bé có tốt không? Cách nấu cháo lươn ngon, đơn giản nhất | Muasalebang
Đang Đọc: Cháo lươn cho bé có tốt không? Cách nấu cháo lươn ngon, đơn giản nhất | Muasalebang in Muasalebang
Iphalishi le-eel lezingane Kuwukudla okuqukethe imisoco eningi, enhle ebuchosheni nasekukhuleni ngokomzimba kwezingane. Kodwa-ke, indlela yokupheka iphalishi kokubili konga isikhathi nokuqinisekisa ukudla okunomsoco, akuwona wonke umuntu owaziyo. Ake sibheke izindlela zokupheka iphalishi le-eel lezingane ngokusebenzisa isihloko esingezansi.
1 Ingabe iphalishi le-eel lilungele izingane?
1.1 Thuthukisa ukusebenza kwemisipha yengane
1.2 Yakha amaseli egazi anempilo wezingane
1.3 Thuthukisa ukusebenza kwamehlo omntwana
1.4 Ikhuthaza ukukhula kwamathambo nezicubu zomzimba
2 Umntwana kufanele adle nini iphalishi le-eel? Ingabe kufanele udle njalo?
3 Imiyalo yezindlela eziyisi-8 zokupheka iphalishi le-eel lezingane
3.1 1. Iphalishi le-eel ne-broccoli
3.2 2. Iphalishi le-eel eliphekwe ngebhanana
3.3 3. Iphalishi le-Moringa eel
3.4 4. Iphalishi le-Potato Eel
3.5 5. Iphalishi Uphizi
3.6 6. Iphalishi le-amaranth eel ebomvu
3.7 7. Iphalishi le-eel lamakhowe
3.8 8. Iphalishi yethanga
3.9 Qaphela lapho ucubungula i-eel
Ingabe iphalishi le-eel lilungele izingane?
Iphalishi le-eel lihlala likhona ekudleni kwezingane ngenxa yezinzuzo ezinkulu ezilethwa yilesi sithako. Uma kukhulunywa ngephalishi le-eel kubhekiselwa ezakhiweni ezibalulekile ezifana namavithamini, amaprotheni, ama-micro-minerals, namafutha anempilo.
Ukusetshenziswa kwezitsha ezenziwe nge-eel kuzosiza ukuvimbela ukungondleki kanye nesifo sohudo. Ezinganeni ezinokugaya okungekuhle, i-anorexia, kanye nobuthakathaka, i-eel iyisiphakamiso esiphelele.
Thuthukisa ukusebenza kwemisipha yengane
I-Eel iqukethe i-amino acid arganine eningi, esetshenziselwa ukuthuthukisa ukusebenza kwemisipha yezingane ezincane, ezisiza ukuba zibe nomzimba omuhle, onempilo, oqinisekayo futhi okhululekile.
Yakha amaseli egazi anempilo wezingane
Okuqukethwe kwamaprotheni ku-eel kuphezulu, lokhu kuzosiza ingane ukuba ingabi nevila, i-anemia futhi ngesikhathi esifanayo isekele ukuthuthukiswa kwezitho zomntwana, ikakhulukazi izitho zokugaya.
Thuthukisa ukusebenza kwamehlo omntwana
I-Vitamin A ku-eel iphezulu kakhulu. Uma ifakwa emzimbeni, le vitamin A yemvelo izosebenza njenge-antioxidant yemvelo ukuvimbela ukulimala kwamehlo, ukusiza ukugcina amehlo ekhanya. Ngaphezu kwalokho, lesi sithako sizosiza futhi ukuvikela i-mucosa yengane kanye ne-cornea, ukuvimbela izifo zamehlo.
Ikhuthaza ukukhula kwamathambo nezicubu zomzimba
I-Eel inothile ngamaminerali afana ne-phosphorus ne-calcium, i-duo edingekayo yokusekela ukusiza ukugcina amathambo eqinile futhi ethambile. Izingane ezifakwe kahle nge-eel zizosiza ukugwema ukuntuleka kwe-calcium ngesikhathi sokuthuthukiswa kobude.
Umntwana kufanele adle nini iphalishi le-eel? Ingabe kufanele udle njalo?
Iphalishi le-eel kulula kakhulu ukulidla futhi liqukethe imisoco eminingi ebalulekile emzimbeni, omama bangakwazi ukunikeza izingane zabo iphalishi ye-eel eneminyaka engu-4 kuya ku-6 izinyanga. Kodwa-ke, isimiso sokugaya somntwana ngalesi sikhathi sisazwela kakhulu, ngakho-ke lapho ucutshungulwa, kuyadingeka ukupheka i-eel kahle futhi uyigaye kahle. Lapho ingane yakho isingaphezu kwezinyanga eziyi-10 ubudala, i-eel ingenziwa ibe mahholo ngaphandle kokuyigaya ngokuyinquma ibe ama-granules noma ukuyihlinza.
Iphalishi le-eel kufanele lisetshenziswe izikhathi ezingu-1 kuya kwezi-2 ngesonto ukuze ingane ikwazi ukumunca izakhi ezidingekayo, ithuthukise kokubili ngokomzimba nangokwengqondo. Ngaphezu kwalokho, omama kufanele bacabangele imizwa yezingane zabo lapho bejabulela iphalishi le-eel ukuze bajwayele ukunambitheka kwengane yabo.
Imiyalo yezindlela eziyisi-8 zokupheka iphalishi le-eel lezingane
1. Iphalishi le-eel ne-broccoli
I-eel porridge enemifino eluhlaza iyindlela elula kakhulu yokwenza, izithako nazo zitholakala kalula. Emifino eluhlaza iqukethe amavithamini amaningi B, A, K kanye ne-calcium ukusekela ukukhula kwamathambo. Inhlanganisela ye-high-protein eel ne-broccoli iyisengezo esiphelele somsoco. Ngakho-ke, lokhu kungenye yezitsha ze-porridge ezikhethwa omama abaningi njengemenyu yansuku zonke yokulunyulwa kwengane yabo.
Inkukhu yenkukhu: 100g
Imifino: 1 isandla
I-ginger entsha: 1/2 igatsha elincane
Anyanisi: 1 bulb
Isinyathelo 1: Pheka iphalishi futhi ulilungiselele
Faka isandla selayisi namanzi ebhodweni ukupheka uphuthu
Imifino wageza, oqoshiwe Ngaphambilini umbokwane ahlanzekile
Isinyathelo sesi-2: Iyacubungula
Bilisa i-eel kuze kube yilapho i-eel ithambile, bese ufaka isinongo ukunambitha.
U-anyanisi ongeyona iphunga elimnandi futhi ugovuze-othosiwe nge-eel, ukhiphe bese ufaka endishini ehlukile
Linda kuze kuvuthwe iphalishi, bese ufaka i-eel nemifino kanye nomhluzi we-eel.
Nambitha isinongo futhi bese usikha endishini ukuze ingane yakho iyijabulele
2. Iphalishi le-eel eliphekwe ngebhanana
Elinye iphalishi le-eel lezingane elikhethwa omama abaningi i-eel porridge ephekwe ngobhanana. Lapho wenza leli phalishi, kuthatha imizuzu engu-20 kuya kwengama-30 kuphela. Ubhanana unothe ngemisoco efana ne-potassium, i-calcium, ne-iron, esiza ukukhula kwemisipha, futhi ubaluleke kakhulu egazini. I-Eel inothile ngamaprotheni namafutha anempilo. Ukuhlanganiswa kwalezi zithako ezimbili kuzosiza ingane yakho ukuba ikhule ngokomzimba nangokwengqondo, imsize ukuba akhuluphale futhi akhulise isifiso sakhe sokudla.
I-eel yensimu elungiselelwe: 500g
Irayisi elingenalutho: isitsha esi-1
Ubhanana omdala: 2
Ilayisi lifakwa namanzi ukupheka iphalishi.
Ngemuva kokucubungula kokuqala, i-eel ibilisiwe, isuswe amathambo, futhi yonke inyama iyathosiwe kuze kube yiphunga elimnandi.
Ubhanana oshukiwe, ocushiwe. Linda kuze kube yilapho iphalishi selivuthiwe, engeza i-eel ethosiwe, kanye nebhanana esiqhingini, upheke enye imizuzu engu-10 ekushiseni okuphansi futhi uphinde ufake isizini ukunambitha.
3. Iphalishi le-Moringa eel
Izakhamzimba ezikwimoringa zisiza ukuthuthukisa amasosha omzimba, zilungele isibindi nezinso, futhi zithuthukisa umzimba. Ukuhlanganisa i-moringa nephrotheni edingekayo ku-eel kuzosiza ukwengeza imisoco edingekayo, kusize ingane ikhule ngokushesha futhi iphile kahle. Ngenxa yalokhu kusetshenziswa okukhulu, omama abaningi babhala iphalishi le-moringa eel kumenyu yezingane zabo masonto onke.
I-eel yensimu elungiselelwe: 200g
I-Moringa: 1 isandla
Irayisi elingenalutho: 400g
Faka irayisi ngamanzi bese ulethe ngamathumba
Amaqabunga kaMoringa akhetha amaqabunga amancane awageze. Kufanele uthathe inani elincane kuphela ngoba uma liningi, umntwana uzothambekela kakhulu ku-colic.
I-Moringa ehlanzekile nge-blender
I-eel ebilisiwe, susa amathambo ukuze uthole inyama ye-eel bese ugoqa-gazinga elimnandi.
Faka kokubili imifino kanye ne-eel ephalishini bese upheka cishe imizuzu engu-5, bese ufaka inkathi ukunambitha.
Lindela uphuthu liphole ukuze ingane ilijabulele.
4. Iphalishi le-Potato Eel
Iphalishi lembotshana yamazambane liyiphalishi elilula, elonga isikhathi, futhi elifanele izingane. Kungithathe cishe imizuzu engu-30 kuphela ukwenza lesi sidlo siphelele. Ngesikhathi esifanayo, i-eel porridge ephekwe ngamazambane izofaka izakhamzimba namavithamini ukusiza izingane zihlale ziphilile. Nansi iresiphi yalesi sidlo omama abangabhekisela kuso futhi basebenzise.
Inkukhu yenkukhu: 200g
Amazambane: 1/4 yezambane
U-anyanisi onsomi: 1 piece
I-Coriander: Amahlumela ambalwa
Geza irayisi kahle, geza amazambane, ikhasi bese uwasika.
Faka irayisi namazambane embizeni ene-1 litre lamanzi
Bilisa i-eel ize ithambe, bese uyikhipha, khipha amathambo enyama, bese uyinquma ibe yizicucu ezincane
Faka i-spoonful ye-oyster sauce epanini bese upheka u-anyanisi, bese ufaka u-eel ugovuze kuze kuvuthwe i-eel.
Thela i-eel ebhodweni lephalishi lamazambane, uhlanganise kahle, ubilise eminye imizuzu eyi-10 bese uphinde ufake isizini ukunambitha.
5. Iphalishi Uphizi
Elinye iphalishi le-eel lengane elinomsoco abazali okufanele bangalinaki lapho bekhetha imenyu yokudla kwezingane i-peas eel porridge. Ama-peas anemisebenzi emihle ekusekeleni ukugaya, ukuthuthukisa impilo yamehlo, ukukhuthaza impilo yenhliziyo, kuhlangene nokudla okunomsoco enyameni ye-eel kuyoba isidlo esihle kakhulu ezinganeni.
I-eel yensimu elungiselelwe: 100g
U-anyanisi obomvu ogayiwe: isandla esingu-1
I-Peas: 30 g
I-oats echotshoziwe: 100g
Geza irayisi ulibeke ebhodweni ukupheka uphuthu. Hlanganisa ama-oats nama-peas, hlambulula ngamanzi ukuze ususe ukungcola futhi ubeke ebhodweni lephalishi njalo.
Ubilise i-eel cishe imizuzu eyi-10 kuze kuvuthwe i-eel, bese uhlunga inyama bese ukhipha amathambo.
Gcoba u-anyanisi onsomi oqotshiwe bese ugoqoza u-eel ndawonye kuze kube u-eel uzingele futhi
Uma iphalishi selivuthiwe, faka i-eel ebhodweni lophuthu, ugovuze ukunambitha izinongo futhi uvumele umntwana ajabulele.
6. Iphalishi le-amaranth eel ebomvu
Kusukela ezikhathini zasendulo, i-amaranth ibhekwa njengomuthi osebenzayo wokwelapha izifo eziningi. Ezinganeni, inhlanganisela ye-amaranth ebomvu ne-eel izozisiza ziqinise ukumelana kwazo, zengeze amavithamini, zisekele ukugaya, futhi zizisize zihlale ziphilile.
I-Amaranth ishiya 10g
I-eel yensimu elungiselelwe 100g
I-tofu encane 100g
Izinongo, amafutha okupheka
Geza bese uhlanza i-amaranth, uyinqume ibe yizicucu ezincane, bese uyikhipha
I-tofu encane, igezwe futhi ibe yizicucu
Faka irayisi ebhodweni ukupheka uphuthu.
Bilisa i-eel bese ususa inyama, ususe amathambo
Bilisa i-tofu ize iphekwe, bese uyigaya ngamanzi
Uma iphalishi selivuthwa, faka ubhontshisi ohlanzekile ugovuze kahle.
Engeza i-amaranth futhi ekugcineni wengeze i-eel, i-seasoning ukunambitha. Kuvumele kuphole futhi kukhiphe ukuze ingane yakho iyijabulele.
7. Iphalishi le-eel lamakhowe
Iphalishi lembozwe utshani alilona iphalishi le-eel lengane, kodwa uma wazi ukusetshenziswa kwalo futhi ulicubungula ngendlela efanele, lokhu kuwukudla okuhle kakhulu kokulunyulwa kwezingane ezinezinyanga ezine kuya phezulu. Utshani obusanhlamvu bunothe ngensimbi, bucebile ngovithamini D, bucebile ngama-antioxidants okusiza ukuvikela isibindi, ukukhipha ubuthi nokuqinisa amasosha omzimba wengane. Ngesikhathi esifanayo, i-eel inamaprotheni amaningi ukusiza ingane ukuba ibe nesisindo futhi ibe nempilo.
Amakhowe otshani: 100g
Ilayisi 1/2 ikani
U-anyanisi onsomi 1 isibani siphihliziwe, ama-scallions amagatsha ambalwa
Geza irayisi, ufake amanzi ebhodweni ukupheka iphalishi
Thatha u-anyanisi oluhlaza, usike kahle
Amakhowe otshani asika impande, cwilisa emanzini anosawoti, bese ugeza futhi usike kahle
Amakhowe ama-straw athosiwe ano-anyanisi othosiwe onephunga elimnandi
Bilisa ibhodwe lamanzi ukuze ubilise i-eel, hlunga inyama engenamathambo. I-eel ethosiwe kuze kube yilapho izingelwa futhi.
Uma iphalishi selivuthiwe, thela i-eel, i-eel kanye nomhluzi wamakhowe ebhodweni lephalishi, isinongo ukunambitha.
8. Iphalishi yethanga
I-pumpkin eel porridge ayiyona nje epholile, epholile, ehlakaza i-phlegm, kodwa futhi ipholisa amathumbu, i-diuretic … Ungabhekisela ekucubunguleni okulula ngezansi.
Imbewu ye-quinoa: 1 isipuni
Izingcezu ezimbalwa ezincanyana ze-zucchini
I-Moringa powder 1/2 isipuni
Irayisi elingenalutho: 100g
Geza irayisi, ubeke amanzi ebhodweni futhi ulilungiselele
Imbewu ye-quinoa icwiliswe emanzini cishe amahora amabili futhi iphekwe phakathi nemizuzu eyi-15
I-eel ebilisiwe, susa inyama, susa amathambo
I-zucchini eqoshiwe futhi ehlanzekile
Uma iphalishi selivuthiwe, une-zucchini, imbewu ye-quinoa kanye ne-eel bese uqhubeka ubilisa cishe imizuzu engu-10 kuze kube lula. Bese unambitha isithokelo ukunambitha futhi uqedele.
Qaphela lapho ucubungula i-eel
Ukucutshungulwa kwe-eel ukuze ingadobi ngenkathi kuqinisekiswa ukudla okunomsoco yinto bonke omama abakhathazeke kakhulu ngayo. Nawa amanye amathiphu ongawasebenzisa:
Hlanza i-eel slime ngokusebenzisa ulamula noma amanzi elayisi ukuze ususe ngokuphelele i-slime emzimbeni we-eel, bese ugeza ngamanzi. Ungakwazi futhi ukucwilisa i-eel emanzini afudumele cishe imizuzu engu-15 ukuze ususe i-slime kalula.
Ngemuva kokuhlanza umzimba we-eel, susa amathumbu esiswini, bese ugeza ngamanzi anosawoti.
Kutuswa ukubilisa umbokwane ophekiwe bese ususa inyama, ungavumeli i-eel icwilise emanzini lapho isiqedile ukubilisa ngoba ngaleyo ndlela i-eel izinhlanzi kakhulu.
Iphalishi le-eel lezingane Kuyisidlo esinomsoco ongasenza kalula. Ngethemba ngokwabelana okungenhla, umama uzoba nezindlela eziningi zokulungisa iphalishi le-eel elimnandi nelinomsoco.
Xem Thêm Bánh căn là gì? Bao nhiêu calo? Bánh căn ăn như thế nào? | Muasalebang
Đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Fit 2 (R220) – Chính hãng giá rẻ | Muasalebang
Nguyên lý hoạt động và chức năng của ampe kế | Muasalebang